Ictiraafka Waxaa Inoogu Dhaw Urur siyaasadeedka Xaqsoor!!! by Abdi Osman Aden(Hadhwanaagnews) Sunday, July 15, 2012 Waxaa Maalmahan lasocdaa xafladaha Xaqsoor ee iskasoo dabadhacaya Dhamaan qaaradaha AduunkaWaxaa Maalmahan lasocdaa xafladaha Xaqsoor ee iskasoo dabadhacaya Dhamaan qaaradaha Aduunka. Hadba Xaqsoor magacaa uu labaxay wuu kamuuqdaaa oo Gurba Wuxuu U Xaqsooray Beesha Sool oo cadaalad daro lagu hayay Mansabyada Sare ee Dalkana aan la ogolayn laakin Ururkan Xaqsoor wuu jeexay Wado Cusub maanta. Waxaana ka muuqata In Xisbigana Haddii ladoorto uu soo dhawayn doono Ictiraafka aynu raadinayay Muddo Dheer Waayo walaalaheen Reer SOOL Ayaynu xaqooqii siinay taasina Waxay Sugaysaa in aynu noqono Dal xuduudihiisa U dhamaystiranyihiin oo iswata Bari Ilaa Galbeed.Aniga Shaqsiyan waxaan taageeray Xaqsoor markaa eegay Qodobadan oo isoo baxday in Xaqsoor kaga Duwanyahay Xisbiyadda Kale.1. Arinta Bariga Markii 1aad ee Beesha Dhulbahante loo doorto Madaxweyne kuxigeen taasina waxy Furo u tahay Ictiraaf iyo
isku Duubnaan Somaliland. Waxaa Kaloo baabayaa Khaatuma State oo carqaladd kuhaysa Somaliland xaga Ictiraafka.2. Gudoomiyaha oo Ah Xassan Cise Daacada Qabyaalad kafog, Gurigiisii London Kuyaalay Usoo iibiyay si Dalkiisa wax ugu qabto, Makulatahay Ninkaasi Waxbuu kacuni Dalka?? jawaabtu waa Maya3. Ibriiqa muu qaadan oo muu Odhan I doorta Xassan ee Gurigisa loogu tagay oo layidhi Xasanow Kaalay Dalka Badbaadi Isna Illahaybuu lasoo faqay Istikhaarana kusoo galay Kolay Nin Illahay la jiraanaa Majabayo 4. Xisbiyadda kale siiba kuwa ugu Culus waxaad moodaa in Laga danbeeya sigaarana loo maalgaliyo taas oo dadbadani oo shacabku kawarhayn. Laakin Xaqsoor wixiisu way cadyihiin CID kadanbaysaana Majirto.Hadaba walalyaal aynu doorano qofka dalka wax u qabanaya ee kadacadaa kaasnaynu horimar ina Gaadhsiinayo Yaynaa Qabyaalad ku dooran ee Iswaydaii Shaqsigana Ummad Dan ma u ´yahay taasbaa dalkaaga iyo ubadkaagaba wax tarayaViva Xaqsoor Visa Somaliland Abdi Osman AdenUK